Agụụ Nkpuchi Nri Nri 10 ″ X 50′- 2
Atụmatụ: 1. Iji ihe ngwugwu PA / PE na ihe akụrụngwa dị elu. PA / Pee Ngwaọrụ: Teknụzụ ihe akaebe atọ sitere na 5 n'ígwé na-eme ka mkparịta ụka dị elu dị ogologo oge nchekwa, etiti naịlọn (PA) na-egbochi ikuku oyi na mmiri site na ịbanye n'ime mkpakọ akpa. Ngwongwo nịịl na-eguzogide na-eguzogide ọgwụ: Nylon si ike ike na ike mkpakọ na-agbanwe na ọnọdụ okpomọkụ ma nwee ike ịjụ oyi na oyi kpọnwụrụ, na-eguzogide ọnọdụ okpomọkụ siri ike. 2. Na-erubere fo ...
N’ịkọkọta atụmatụ kacha mma nke Quad Seal na Guzosie Pouch, The Flat Bottom Bag (makwaara dị ka Igbe obere akpa) nwere akwa shelf mkpesa, mgbe jirichaa ma shelf na mbukota ohere na a katọn-style ewepụghị ala gusset. Akpa Akpụkpọ ụkwụ na-ekwe ka ihe dị mfe dị elu ma kwekọọ n'ọtụtụ ngwa ahịa, site na nri mmiri, kọfị, na muesli, site na nri anụ ụlọ na ngwaahịa hotikoisho. Akụkụ nke Flat Bottom Bag Siri ike lamination na-enye ezigbo rigidity zuru okè onwe guzo a ...
N’ịkọkọta atụmatụ kacha mma nke Quad Seal na Guzosie Pouch, The Flat Bottom Bag (makwaara dị ka Igbe obere akpa) nwere akwa shelf mkpesa, mgbe jirichaa ma shelf na mbukota ohere na a katọn-style ewepụghị ala gusset. Akpa Akpụkpọ ụkwụ na-ekwe ka ihe dị mfe dị elu ma kwekọọ n'ọtụtụ ngwa ahịa, site na nri mmiri, kọfị, na muesli, site na nri anụ ụlọ na ngwaahịa hotikoisho. Atụmatụ nke Ewepụghị Bottom & Guzosie Up Bag siri ike siri ike lamination na-enye ezigbo rigidity zuru okè ...
Na ijikọta atụmatụ kachasị mma nke Quad Seal na Stand Up Pouch, Akwụkwọ Kraft Flat Bottom Bag (nke a makwaara dị ka Box Pouch) nwere mkpesa dị elu, ebe ọ na-eme ka ma shelf ma oghere dị na katọn dị larịị gusset. Akpa Akpụkpọ ụkwụ na-ekwe ka ihe dị mfe dị elu ma kwekọọ n'ọtụtụ ngwa ahịa, site na nri mmiri, kọfị, na muesli, site na nri anụ ụlọ na ngwaahịa hotikoisho. Akụkụ nke Akwụkwọ Kraft Flat Bottom Bag siri ike lamination na-enye ezigbo mma maka ...
HONGBANG kesara nnukwu mma omenala ebipụta mpịakọta ngwaahịa plastic ịse ngwaahịa na ndị ahịa gafee Europe na America ihe karịrị afọ 20. Ọ na-enye a dịgasị iche iche nke a dịgasị iche iche nke a dịgasị iche iche nke ihe mgbochi plastic laminated film. A na-eji imirikiti ngwaahịa ihe nkiri maka ngwa nkwakọ ngwaahịa nri na ndị ọzọ na-aga ngwa pụrụ iche. Anyị na-enye ihe ngwọta maka ụdị ihe nkiri ihe nkiri dị iche iche. Onu ogugu enwere ike ichota ihe onyonyo anyi di otutu. Ma ...
Omenala E Bipụtara Plastic Film apụta Printing maka Auto mbukota
Nkwakọ ihe nkpuchi nke akpa plastic
N'oge a, iwelata nje virus na-aghọ ihe kachasị mkpa, ya mere ụlọ ọrụ anyị na-esonye n'agha a na ụwa. Anyị na-enye nkwakọ ngwaahịa mkpuchi ihu nke plastic plastic with logos, nke na-echekwa ihe nkpuchi ihu gị na mbibi niile nwere ike ime ma gbatị oge nchekwa. Akpa rọba nwere zipa ma ọ bụ teepu na-ejide onwe ha n'elu. Ihe ndị a na-eme ka ihe nkpuchi ihu na-adaba adaba na-adaba adaba. Otu mkpọ gụnyere 1-20 ma ọ bụ karịa ihe nkpuchi ihu. Anyị na-emepụta disposable nkpuchi nkwakọ akpa na reusable ma ...
Ikuku Kọlụm Ikuku maka iji Fregile Ngwaahịa ma mebie emebi Ọdịdị obosara nke mpịakọta ikuku bụ 2 cm, 3 cm Ogologo ikuku ikuku, nwere mmetụta dị mma karị. Ma nke a na-ejikarị eme ihe bụ 3 cm obosara obosara. Ọkpụrụkpụ nwekwara 7um, nke siri ike karị na-enwe nchebe ka mma. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi, biko kpọtụrụ anyị maka mkparịta ụka. O nwekwara ike ị ga-adọka ma ọ bụ bepụ, ga-eburu ngwongwo ndị na-adịghị ike, dị ka ọrụ aka iko, nnyefe awara awara, mmanya na-acha ọbara ọbara, poselin, nkenke ngwa, wdg.
Kraft Akwụkwọ Guzosie Up obere akpa
Kraft akwụkwọ guzoro obere akpa akwụkwọ na-ebili obere akpa bụ a kasị ewu ewu nkwakọ ịke nke ahịa n'ihi na nke a ụdị nkwakọ bụ vasatail na bara uru dị ka nke ọma dị ka mma. Dị ka aha ya na-egosi, akpa ndị a na-enwe ike ebili na elu ọ bụla siri ike. Ọ nwere ikike ngosipụta dị ukwuu ma ha nwere ike ibelata mkpa nchekwa na ịchekwa ohere nchekwa. Ọtụtụ mgbe, a na-ejikarị obere akpa ebili na nri, nri, ọla, tii ma ọ bụ kọfị. Njirimara nke ebili pouch the s ...
The Plastic ebili pouch bụ a kasị ewu ewu na nkwakọ ịke style of ahịa n'ihi na nke a ụdị nkwakọ bụ vasatail na bara uru dị ka nke ọma dị ka mma. Dị ka aha ya na-egosi, akpa ndị a na-enwe ike ebili na elu ọ bụla siri ike. Ọ nwere ikike ngosipụta dị ukwuu ma ha nwere ike ibelata mkpa nchekwa na ịchekwa ohere nchekwa. Ọtụtụ mgbe, a na-ejikarị obere akpa ebili na nri, nri, ọla, tii ma ọ bụ kọfị, nkịta nkịta, nkwakọ ngwaahịa nri Pet. Njirimara nke nri nri Pet bụ ...
Akpa ekwentị mkpanaka akpa
Akpa mkpọchi mkpọchi bụ ụdị nkwakọ ngwaahịa kachasị ewu ewu nke ahịa n'ihi na ụdị nkwakọ ngwaahịa a bara uru yana bara uru yana mara mma. Dị ka aha ya na-egosi, akpa ndị a na-enwe ike ebili na elu ọ bụla siri ike. Ọ nwere ikike ngosipụta dị ukwuu ma ha nwere ike ibelata mkpa nchekwa na ịchekwa ohere nchekwa. Ọtụtụ mgbe, na-ebili obere akpa tumadi iji na nri, nanị, ọla, tii ma ọ bụ kọfị, nkịta nri, Pet nri ， na ekwentị ngwa nkwakọ. Kwadoro ...